Samsung ga - ewepụta 10 Galaxy Note na ụdị 4, 2 n'ime ha nwere 5G | Gam akporosis
Taa anyị maara nke ahụ A ga-ewepụta ihe ngosi Samsung nke 10 na ụdị 4 dị iche iche. Abụọ ga-anọ na 4G LTE, ebe ndị nke ọzọ ga-eji 2G nye ndị kachasị elu nbudata na bulite ọsọ dị; ma ọ bụrụhaala na anyị nwere ohere ịnweta netwọk ndị a.
Samsungfọdụ Samsung Galaxy S10 wepụtara ihe karịrị 1 ọnwa gara aga na nke ahụ adịghị akwado 5Gọ bụ ezie na na-abịa na ọ ga-enwe ike iji ọsọ ndị ahụ dị egwu iji nye ahụmịhe njikọ ọzọ site na ngwaọrụ mkpanaaka.
O sitere na ETNews ebe edepụtara ya na Samsung ga-ebido ụdị 4 dị iche iche nke Note 10. Abụọ ga-anọ 4G LTE na mmadụ abụọ ndị ọzọ nwere 5G. Dabere na isi mmalite dị iche iche, Samsung nwere atụmatụ maka abụọ 6,28-inch na 6,75 ants iche nke Nkọwa 10 na LTE.
Nta nke abụọ ga-enwe 3 ese foto n'azụ, mgbe ibu ibu ga-eru 4 ogheres Versionsdị 5G ga-enwe njirimara yiri nke ahụ, ọ bụ ezie na ha nwere nnukwu mgbakwunye nke bụ modem Qualcomm X50 na ụfọdụ akwụkwọ ọhụụ iji mepụta antennas nke modem ndị a kpọtụrụ aha.
N'ihe ngosi ọhụrụ 10 anyị maara na ikekwe anyị ga-eche ihu na ngwaọrụ mkpanaka na-enweghị ụdị bọtịnụ ọ bụla, ọ bụ ezie na ọ ga-adị mkpa iji hụ ma anyị bụ n'ụzọ ziri ezi na nnukwu eziokwu ahụ, ebe ọ bụ na asịrị na-abụkarị nke ahụ, asịrị.
Ebe ọ bụ na anyị ka nọ n’ọnwa Eprel na enwere ezuola maka igba egbe ahụ Ihe ngosi ọhụụ 10 nke Samsung, anyị ga-atụ anya nnukwu mkpọsa nke ụdị akụkọ ọ bụla metụtara ekwentị a ga-abụ ihe ọzọ kachasị mma n'afọ.
El 10 Galaxy Note na ụdị 4 4G ya na 5G A na-eme atụmatụ ka a mara ya na August 8, nke ahụ bụ naanị ọnwa 4. Dị ka ha na-ekwu, ndidi bụ omume ọma; ọ bụ ezie na anyị ga-enwe nnukwu Galaxy S10 mgbe niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung ga-ebido ụdị 4 Galaxy Note 10 na 4G na 5G
Huawei nwere atụmanya dị elu maka usoro P30: na-akwadebe nde 6 maka ahịa ụwa